Etu Ego Ahịa Ahịa Oge-Azụ Pụrụ Isi bulie Ego Azụmaahịa | Martech Zone
Etu Ego Ahịa Ahịa Oge-Azụ Pụrụ Isi Nwee Azụmaahịa Arụ Ọrụ
Tuesday, February 11, 2020 Tuesday, February 11, 2020 Pete Eppele
Dị ka ụwa nke oge a na-etinyewanye mkpa na ọsọ na mgbanwe, ikike nke itinye ezigbo oge, ọnụego dị oke mkpa na ntuziaka ire ahịa n'ime ọwa ahịa ha nwere ike inye ndị azụmaahịa aka karịa ndị asọmpi ma a bịa n'ịtụle atụmanya ndị ahịa. N'ezie, ka ihe a na-achọ ịrụ ọrụ na-abawanye, otú ahụkwa ka ihe siri ike azụmahịa dị.
Ọnọdụ ahịa na mgbanwe azụmaahịa na-agbanwe n'ike n'ike, na-ahapụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ịzaghachi ihe na-akpata ọnụahịa - ihe omume dịka mgbanwe ọnụahịa, ọnụahịa, ọnụahịa asọmpi, ọnọdụ ngwongwo, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa mgbanwe ọnụahịa - ngwa ngwa, rụọ ọrụ nke ọma na nke ọma. Ozugbo enwere ike ịkọwa ya ma nwee ike ijikwa ya, ihe na-akpata ọnụahịa na-eme ọtụtụ oge.
Na 2020, ndị ahịa B2B na-atụ anya ka ahụmịhe ndị ahịa si n'aka ndị na-eweta azụmaahịa ha - ọkachasị maka ọnụahịa. Agbanyeghị mgbagwoju anya dị na B2B ịnye ọnụahịa, ndị ahịa na-atụ anya na ọnụahịa na-egosipụta ọnọdụ ahịa n'ụzọ ziri ezi, dị mma, ahaziri ma ozugbo enwere - ọbụlagodi maka nnukwu okwu.
Dabere na usoro ịsọpụrụ iji setịpụ ọnụ ahịa emeela ka naanị mmetụta ọjọọ nke ntinye ọnụahịa na-ebute. Kama nke ahụ, ndị isi ọhụụ kwesịrị ịtụgharịrị ụzọ ha ga-esi nyefee ọnụahịa azụmaahịa Real-Time.
Real-Time Market Pnye ọnụahịa bụ ọhụụ ọnụahịa dị oke egwu ma na sayensị. N'adịghị ka ọnụahịa ndị ọzọ siri ike na-abịaru nso, ọ naghị akwụsị na iwu akpaaka; ọ na-adị ngwa ịzaghachi, ma n'ụzọ ọgụgụ isi.
N'isiokwu a, aga m agagharị gị n'okwu abụọ eji eme ihe maka azụmaahịa azụmaahịa oge - na eCommerce na nnabata nnabata ọnụahịa maka iwu - ma tụlee etu ị ga-esi tụleghachi ọnọdụ ahụ nwere ike ịkwalite azụmaahịa gị ma bulie arụmọrụ azụmaahịa.
Marketnye ọnụahịa Oge Ahịa na eCommerce - Ihe Ọ Bụ na Ihe Mere I Ji Chọrọ Ya
Gbaa mbọ hụ na ọnụahịa na-arụ ọrụ nke ọma na ọwa ọdịnala siri ike n'onwe ya; agbatịwo ụlọ ọrụ na ọnụ ụzọ nke eCommerce.
Ajụjụ kachasị mkpa m na-anụ n'ọnụ ndị isi ụlọ ọrụ B2B mgbe ọ bịara n'ihe ngwọta eCommerce siri ike metụtara ịnye ọnụahịa. Ajụjụ gụnyere:
Kedu ọnụ ahịa a kwesịrị igosi ndị ahịa n'ịntanetị?
Kedu otu m ga-esi amata ọdịiche dị iche iche ọnụahịa ji sọpụrụ mmekọrịta ndị ahịa dị ugbu a?
Ọ bụrụkwanụ na ọnụ ahịa m gosipụtara na ntanetị dị ala karịa ihe ndị ahịa m na-akwụ?
Kedụ ka m ga - esi kwụọ ụgwọ ziri ezi nke na - adọta ndị ahịa ọhụrụ ka ha bido ịmalite ịzụ m ahịa n’achọghị oke oke?
Ọnụ m dị mma ọrịre iji resị ndị ahịa ihe ọhụụ, na-agwaghị ndị na-ere ahịa okwu ma ọ bụ na ha chọrọ ịkpa nkata?
Ajuju ndi a nile bara uru karie, n’agbanyeghi, ichota maka nkewa n’onye iche aghaghi enye gi mpi ogologo oge n’igwe a di nkpa. Kama nke ahụ, ọnụahịa eCommerce ga-enwerịrị ike. Ọnụ ego dị omimi - mgbe ihe nke a buzzword - pụtara na ndị ahịa gị na-ahụ ọnụahịa ndị dị mkpa maka ọnọdụ ahịa n'oge ọ bụla. N'aka ozo, Ahịa ahia oge-ahia.
Ọ bụ ezie na nkọwa ahụ dị mfe, inweta ya abụghị nke kwụ ọtọ. N'ezie, ịkwụ ụgwọ ahịa ahịa maka eCommerce agaghị ekwe omume mgbe naanị ngwaọrụ dị na igbe ọrụ gị bụ akwụkwọ mgbasa ozi ọdịnala na ụzọ data na-adịghị mma nke na-eto eto tupu enwere ike nyochaa ha, ma ya fọdụzie ime ihe.
Kama nke ahụ, ndị na-ere ngwanrọ na-akwụ ụgwọ nwere ike inyere gị aka ịtọ usoro nghọta dị iche iche ma ọ bụ nke otu oge n'ịntanetị nke na-enweta ọtụtụ ebumnuche maka azụmaahịa ahụ, ebe ị na-enye ndị ahịa ọnụahịa ha na-atụ anya na enweghị oge.
Otu ihe eji eme eCommerce bụ iji data akọwapụtara na ntanetị dị ka nyocha peeji nke, mgbanwe, ịhapụ ụgbọ na nnweta nnweta iji setịpụ ọtụtụ atụmatụ mbelata maka ọnụahịa eCommerce. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ngwongwo na peeji nke nwere obere ntụgharị nwere ike igosi ọnụahịa dị oke elu. (E nwere ọnụahịa ahụ na-akpalite!)
Tọ usoro amamịghe dị mfe karị na-adị mfe karịa na nke a, nke na-enye onye ọrụ ohere ịmịnye ma nyochaa usoro data dị iche iche, mana na-emezigharị nkwụsị ego na ada. Dịka ọmụmaatụ, ịtọlite ​​mbelata ego 30 pasent na ọnụọgụ nke nkeji 20 mgbe data na-egosi ọnụahịa dị oke oke ịkwaga ngwa ahịa. Mgbe ejikọtara ọnụ site na API dị elu, ọnụahịa ma ọ bụ mwepu ego ọhụụ nwere ike ịmegharị ozugbo na ọwa eCommerce gị.
Na mgbakwunye na ịtọ ọtụtụ usoro mbelata, ọnụahịa azụmaahịa oge maka eCommerce na-enye ụlọ ọrụ B2B ohere:
Dị iche ọnụahịa maka ndị ahịa dị ugbu a na ndị ọbịa ọhụụ na ngalaba ngwaahịa ma ọ bụ ọkwa SKU
Debe ego ndị akọwapụtara na eCommerce nke enwere ike ịhazi (ma ọ bụ lekwasịrị anya) na ngalaba ndị ahịa na otu ngwaahịa
Nye ndị ahịa nkwekọrịta ọnụahịa ndị ahịa na ọnụahịa siri ike dị ike maka ọnụọgụ ntanetị n'ịntanetị
Na-etinye ọnụ na-agbanwe agbanwe dabere na njikarịcha ọnụahịa, na-eme ka ọnụ ahịa ọnụahịa nke ọnụego na-eme ka enwetakwa ego na azụmaahịa maka azụmahịa
Gbanwe site na mmeghachi omume, usoro ndị na-agwụ ike chọrọ ka ị na-echegharị ihe na-aga n'ihu, usoro data-sayensị iji mee ka ịre ahịa Ahịa Oge. Ime otu a, azụmaahịa nwere ike ịkwado nke ọma iji zute atụmanya ndị ahịa n'ịntanetị.
Marketnye ọnụahịa azụmaahịa maka iwu na-eme ka mmezi ego na arụmọrụ
N'ezie, otu uru nke ọnụahịa azụmaahịa oge maka eCommerce na-adị mfe ịgbatị na usoro ọnụahịa ndị ọzọ na usoro nhazi n'ime ụlọ ọrụ B2B. Mgbe ike, ọnụ ahịa kachasị na-ebuga site na API dị elu, mbara igwe na-enwe oke njedebe mgbe ọ bịara n'ụdị nsogbu ị nwere ike idozi n'oge.
Onye a ma ama na-erite uru na njirimara ọnụahịa bụ ezigbo onye ahịa Zilli dị ogologo Shaw Industries Group Inc., onye na-eweta ụlọ elu ụwa na-arụ ọrụ karịrị $ 2 ijeri-dollar 'nke ego ha na-enweta kwa afọ na ọtụtụ nde ndị ahịa ọnụahịa nkwekọrịta.
Shaw na-eji ikike ịnye ọnụahịa akwụ ụgwọ iji gosipụta na iwu ya dakọtara ọnụahịa a kwadoro na ezigbo oge, wee wega ya na nnabata (s) ziri ezi dabere na ọkwa nnabata anyị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na achọpụtara mismatches ọ bụla, a na-eziga iwu ahụ ozugbo na kọntaktị kwesịrị ekwesị iji kwado ma ọ bụ mezie ya ozugbo. Arụ ọrụ sọftụwia enyere Shaw aka ịhazi ihe dịka 15,000 arịrịọ kwa ụbọchị, ma gbanwee mgbanwe na arụmọrụ yana ọkwa ihu ọma ọsịsọ. Typesdị mgbanwe ndị a were ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa tupu ha emetụta usoro ihe ochie anyị.
Carla Clark, Onye isi Nchịkwa Ego Maka Industlọ Ọrụ Shaw
Na mgbakwunye na arụmọrụ arụmọrụ Real-Time Market Pricing nwere ike inye aka, ụlọ ọrụ B2B na-akwụkwa elu iji bulie ego na oke oke mgbe ha na-enyefe ahụmịhe ahaziri iche ndị ahịa na-atụ anya.
Ọnụahịa ahia oge maka eCommerce ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ kwesịrị ịdị ozugbo, ọnụego ahaziri iche nke na-agbanwe agbanwe n'ofe ọwa ma gosipụta n'ụzọ ziri ezi ọnọdụ ahịa na mmekọrịta ndị ahịa ugbu a. A ga-enyefe ya ozugbo, ọbụlagodi maka arịrịọ buru ibu, na-enweghị oge ọ bụla n'oge mkparịta ụka. Na mgbakwunye, maka otu ihe ga-eme n'ezie ịdị ike na ezigbo oge, ọ kwesịrị:
Gosiputa onu ahia nke ugbua nke agbakọtara na / ma obu kachasie ike site na ntinye di iche iche
Jiri ọtụtụ data sitere na iche iche, na-akparaghị ókè na isi ihe nwere ọgụgụ isi
Nyefee ọnụahịa kwekọrọ na atụmatụ n'ofe ọwa na oge
Jiri ọgụgụ isi rụọ ọrụ nkwenye, mkparịta ụka, counterproposals
Nyefee ezigbo ire ere na ire ere
Ịmatakwu banyere Real-Time Market Pnye ọnụahịa nke na-anapụta ahaziri, ọgụgụ isi na ahịa-mkpa ịnye ọnụahịa na a oge, mara Zilliant mara ọkwa:
Ọnụ ego maka azụmaahịa E-azụmaahịa
Tags: okirikiri carlaike ịnye ọnụahịaọgụgụ isi ịnye ọnụahịaịnye ọnụahịaezigbo oge ịnye ọnụahịaỌnụahịa ahia oge maka eCommerceezigbo oge ịnye ọnụahịannweta egoshaw ụlọ ọrụamamiihe
Pete na-eweta afọ 20 nke ahụmịhe atụmatụ ngwaahịa, na-enyere ụlọ ọrụ Fortune 500 aka inweta nnukwu Data iji melite arụmọrụ azụmahịa. Dịka Onye isi oche ndị isi nke Ngwaahịa na Sayensị, Pete bụ ọrụ maka iduga Ihe omimiMgbalị R&D na ịkọwapụta usoro ndụ na ihe ndị achọrọ. Tupu Zilliant, Pete jere ozi dị ka onye isi oche nke Ahịa Ahịa na Yclip. Tupu Yclip, Pete jisiri ike nweta kD1 ngwa ngwa data na ngwa nkwado nke Walgreens, Lowe's Home Improvement na Pepsi / Frito Lay.